Powder Cetilistat manta (282526-98-1) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Ny vovo-dronono Cetilistat dia mpanakana ny lipase pancreatic novolavolain'i Alizyme ho fitsaboana ny hatavezina sy ireo mpiara-miasa aminy… ..
Vovoka Cetilistat manta (282526-98-1) horonantsary
Vovoka Cetilistat manta (282526-98-1) Famaritana
Ny vovo-dronono Raw Cetilistat dia mpanakana ny lipase pancreatic novokarin'i Alizyme ho an'ny fitsaboana ny hatavezina sy diabeta ary aretina hafa. Miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny lipase pancreatic, anzima iray izay manapotika ny triglycerides ao anaty tsinay. Manakana ny tavy (triglycerides) amin'ny sakafo tsy hatao metabolika ary avadika ho asidra matavy afaka afaka entin'ny vatana. Ny vovo-dronono Cetilistat dia nampihena be ny lanja ary zaka kokoa noho ny orlistat.
Color Kristaly fotsy
▪ Fitsaboana ny hatavezina
▪ Fihenan'ny lanjan'ny vatana
▪ Fitsaboana diabeta
▪ Mandefitra tsara raha oharina amin'ny fanafody hafa
Ireo marary miatrika fitsaboana amin'ny hatavezina amin'ny vovony Cetilistat dia mety hijaly amin'ny voka-dratsy. Tokony hampahafantarinao ny mpitsabo anao raha mitranga izany. Misy voka-dratsy sasany ho fanovozan-kevitra: